Laser Cutting Machine, Laser eqopha Machine, Galvo Laser Machine - Golden Laser
Laser GOLDEN lugxile ekuhlinzekeni ezihlakaniphile, digital, futhi ezenzakalelayo laser izixazululo.
Umkhiqizi laser izinhlelo ukusika, umbhalo kanye wokugubha. Lo chwepheshe e CO2 laser cutting umshini futhi Galvo laser umshini.
Kusukela Consulting ngowokuqala ukuhlolwa isicelo ngezinto zakho yakhelwe umkhakha othize ukuba ukuqeqeshwa kubasebenzisi futhi emhlabeni wonke - Golden laser inikeza esibanzi laser izixazululo, hhayi kuphela umshini olulodwa!
Model Cha: JMCCJG-350400LD
CO2 Laser umsiki ngoba Hlunga Indwangu / Industrial Filtration Kwangezikhathi
High ngokunemba gear kanye yokubeka. Ukuphuca akhuphula ukuze 1200mm / s. Umhlaba-class RF CO2 metal laser 150W, 300W, 600W. Umshini elihambayo. yokudla okuzenzakalelayo, ukungezwani ukulungiswa.
Model Cha: JMC-250300LD
Gear & Rack Driven CO2 Laser umsiki for Technical Izindwangu
Gear & yokubeka enophephela laser cutting umshini anele ukwenza amandla okusezingeni eliphezulu CO2 laser tube. It uyaqaphela super ngesivinini ukusheshisa nesivinini cutting ne yokukhanya flying.
Model Cha: JMCCJG-160300LD
Speed ​​High ingubo Indwangu Laser Cutting Machine
Kokuphakathi & batch amancane nezinhlobo ezihlukahlukene ukukhiqizwa ingubo, Isiza izingubo ngezifiso. ithebula zokusebenza elihambayo, Element othomathikhi nangaphezulu obuphelele yokwakha isidleke.
Model Cha: XBJGHY-160100LD II
Independent Dual Shona Isikhumba Laser Cutting Machine ngoba Izicathulo
laser amakhanda amabili ezisebenza ngayodwana usike ihluzo ezahlukene ngesikhathi esisodwa. A ezihlukahlukene laser ukucutshungulwa (laser cutting, isibhakela scribing, njll) kungenziwa eseqedile ngesikhathi esisodwa.
Model Cha: ZJJF (3D) -160LD
Roll ukuze Roll Flying Indwangu Laser eqopha Machine
3D uhlelo Galvo ashukumisayo, saqeda lokuqopha okuqhubekayo wokugubha ngesinyathelo esisodwa. "On the fly" laser ubuchwepheshe. Ifanele yokwehlela enkulu Indwangu, zendwangu, zesikhumba jini, EVA oqoshiwe.
Model Cha: ZJ (3D) -170200LD
Galvo Laser Isikhumba eqopha Cutting Machine ngoba Shoe Imboni
Top isivinini kanye elikhulu format laser oqoshiwe, perforating futhi ukuzisika. Dual uhlelo ukushayela nge igiya yokubeka isakhiwo. Kwenzelwe galvanometer uhlelo.
Model Cha: ZJ (3D) -9045TB
Speed ​​High Galvo Laser eqopha Machine ngoba Isikhumba Shoe
CO2 RF laser metal 150W 300W 600W. 3D ashukumisayo uhlelo lokulawula galvanometer. kuze Automatic futhi phansi Z-eksisi. Okuzenzakalelayo Shuttle-zinc-iron ithebula ingxubevange lezinyosi zokusebenza.
Model Cha: ZJJG (3D) 170200LD
Galvo Laser Cutting futhi Perforating Machine ngoba Jersey Indwangu
A enemisebenzi laser emshinini usike, uqophe, perforate wamanga-usike i amajezi, i-polyester, wangaphandle, ngisho Indwangu elula.
Model Cha: CJGV-160130LD
Vision laser ilungele ukusika digital ukuphrinta Sublimation yendwangu izindwangu kuzo zonke ngezindlela ezihlukahlukene futhi ayilingani. Amakhamera scan indwangu, ukuthola bona nentaba ezinyathelisiwe, noma ukucosha namashumi yokubhalisa emamaki wanquma imiklamo abakhethiwe ngesivinini kanye nokunemba.
Model Cha: JGC-160100LD
GOLDENCAM Ikhamera Ukubhaliswa Laser umsiki
High ngokunemba yokubhalisa emamaki ukuma nohlakaniphe ukusonteka isinxephezelo ngokunembile laser cutting of udayi Sublimation ephrintiwe amalogo, izinhlamvu nezinombolo.
Model Cha: XBQNZDJG-160120LD II
Independent Heads ababili Vision Ikhamera Laser umsiki Machine
Ozimele amakhanda amabili laser cutting uhlelo ngokuphelele ngokuhlanganiswa smart umbono uhlelo, futhi eminye elungiselelwe nezidingo ephrintiwe ihluzo processing.
Model Cha: CJGV-320400LD
Wide Ifomethi Laser Cutting Machine ngoba Amafulegi, izibhengezo, Soft nezimpawu
Esikhulu umbono laser umsiki kuyinto ngokukhethekile digital ukuphrinta umkhakha - esikhiqiza amakhono ngezinga elingakaze lifinyelelwe kokuqeda format ububanzi sayinwe iphrintwe noma udayi-sublimated yendwangu ihluzo, izibhengezo nezimpawu esithambile.
Model Cha: LC-350
Roll ukuze Roll Ilebula Laser Cutting Machine
Golden Laser ufake isicelo zezimboni laser ubuchwepheshe emkhakheni amalebula self-Yesigcilikisha afe ahlabayo. Nge roll kwethu Roll laser uhlelo ahlabayo, ungakwazi ukusika amalebula kakhulu ngokunembile ingcina, amalebula ephrintiwe, izitika, iphepha, ifilimu, njll
Model Cha: LC-230
Lokhu die laser umsiki web esiphezulu nobubanzi 230mm, laser CO2 RF 70W, 100W noma 150W. Nge roll kwethu Roll laser uhlelo ahlabayo, ungakwazi ukusika amalebula kakhulu ngokunembile ingcina, amalebula ephrintiwe, izitika, iphepha, ifilimu, njll
Model Cha: LC230
Laser Die Cutting Machine ngoba Boneka Material / Dlulisela Film
Laser die-usike impahla lembhali, ephelele ephezulu ukubonakala izingubo umkhakha. Yonke inqubo ezishintshayo. Impela laser cutting
Sinikeza isicelo izixazululo esekelwe laser ubuchwepheshe. Khetha umkhakha wakho: ofanele kakhulu laser izixazululo ekufanele
ISIBHENGEZO & MAKA
Tube & ipayipi
Ngobuchwepheshe emisha eqinile, Golden Laser uyakwazi ukunikeza ngokwezifiso imishini laser kanye nezixazululo, wenze umkhiqizo wakho iyashelela futhi inzuzo.
Njengoba emisha esaqopha umlando zobuchwepheshe, laser okhula ne izinzuzo ezingenakulinganiswa, esikhundleni izinqubo bendabuko abaningi.
Njalo zinikeze. Onjiniyela atholakale isevisi imishini kwezilwandle service ukufakwa, service ukuqeqeshwa inkonzo yesondlo.
Precision Ukukhiqiza Ukuphishekela Ovelele
Laser Solutions Oholela Umhlinzeki
Ngu nakho iminyaka engu-20 'e laser umkhakha, basaqhubeka nokuthuthukisa kanjalo besebenzisa ubuchwepheshe ezithuthukile, GOLDEN laser isibe nomkhiqizi ehamba phambili imishini laser nge eyinkimbinkimbi ngokwezifiso khono.
GOLDEN laser ikunikeza professional laser izixazululo isicelo umkhakha wakho ethize - ukukusiza ukwandisa umkhiqizo, lula ngokucubungula inqubo sithole imbuyiselo ngaphezulu.
Ezimakethe kwezilwandle, GOLDEN laser umise ukumaketha inethiwekhi abavuthiwe emazweni angaphezu kuka-100 futhi izifunda emhlabeni wonke, nemikhiqizo yethu ukuncintisana kanye emakethe ngamakhasimende uhlelo emisha.